true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 7 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Umuntu angafinyelela ama-goals akhe ngokusebenza amacebo nezinhlelo, bese enza izinyathelo zezinhlelo nge-target. Kunezenzo zansuku zonke nezangesonto okufanele azenze ezizophumela kuma-targets nezinhlelo ezigcwalisiwe. Ithuluzi angalisebenzisa ukwenza izinhlelo zakhe zenziwe, amacebo akhe aqediwe nama-goals akhe aphelelisiwe yizinhlelo zokulwa.
“Uhlelo lokulwa” luchazwa njengohlu lwe-target yosuku oluzayo noma ngesonto elizayo esiza ukusiza ukuhlelela amasu. Lama-targets abhekana nezenzo ezidinga ukwenziwa esikhathini samanje noma ngokushesha okukhulu. Baphinde baphathe noma yini engahle ivimbe i-target, njengokuthile okungalungile, okushodayo noma okwenziwe ngokungalungile.
Abanye abantu babhala izinhlelo zokulwa njengochungechunge lwezenzo abanethemba lokuthi luzokwenziwa ngosuku noma ngesonto elizayo. Lokhu kuhle futhi kungcono kunalutho futhi kusiza ukuhlela izenzo esidingekayo. Kungenzeka ukuthi othile ongakwenzi lokhu uzokwenza okuncane kakhulu futhi acasuke kakhulu futhi “abe matasa” kunomuntu okwenzayo. Indlela enhle yokufeza ukukhiqiza wukuthi umuntu ahlele, ngendlela ehlelekile, lokho ahlose ukukwenza ngosuku noma ngesonto elizayo aze akwenze. Kepha lokhu usebenzisa ukuhlela impi njengethuluzi ngendlela eyisisekelo.
Ake sibheke izincazelo. Kungani lokhu kubizwa ngokuthi uhlelo lokulwa? Lokhu kubonakala njengegama elibi kakhulu lezempi okufanele lisebenziswe ezweni lokuphatha lemihla ngemihla. Kepha kuyafanelana futhi kuyigama eliwusizo.
Impi yinto eyenzeka esikhathini eside ngakho konke kuncike ekutheni ngubani ophumelelayo noma olahlekelwe. Ukulwa yinto eyenzeka esikhathini esifushane. Ibutho lingalahlekelwa izimpi eziningana bese liqhubeka nokuwina impi. Ngohlelo lokulwa, umuntu ukhuluma ngezikhathi ezimfishane zesikhathi.
Kuningi kulokhu. Uma kukhulunywa ngempi, umuntu ukhuluma ngochungechunge lwezehlakalo ezenzeka esikhathini eside. Akukho abaholi empini abake baphumelela ngaphandle kokuthi benze amasu athile okuhlela. Lokhu kungathinta intuthuko yempi noma ingxenye enkulu yayo futhi kuyobe kuphathelene nemibono emikhulu, esezingeni eliphakeme. Uhlelo lwamasu lubanzi, alunamininingwane, lunezinjongo ezicacile futhi lufanela phezu kwe Sikali Sokuphatha.
Emazingeni aphansi kwananoma yimuphi umsebenzi, ngaphansi kokuhlela kwamasu, umuntu unokuhlela okubonakalayo. Ukuze wenze uhlelo lwamasu, kufanele kube nohlelo lokuhamba (njengokuthi mangaki amasosha okufanele athunyelwe lapho futhi ngasiphi isikhathi) nezenzo (njengokuthi azohlasela noma alinde enye into ukuthi ivele kuqala). Lezi ngezinye zezinto ezidingekayo ukufeza ukuhlela okunobuhlakani. Ukuhlela ngamasu ngokujwayelekile kwenzeka emazingeni aphansi embuthweni futhi kuvame ukusetshenziselwa ukubeka ukuhlelwa kwecebo ekusebenzeni.
Ukuhlela ngamasu kungafaka imininingwane eminingi, kubeke nezenzo ezenziwa elinye isosha, njengokuthi “Isosha u-Joe kumele abeke isibhamu sakhe somshini sikhomba eqenjini lezihlahla phezulu kwentaba nomlilo uma kukhona ongena kukho.”
“Abaphathi abaphakathi”—abaholi bamaqembu amakhulu amasosha ngaphakathi kwamasosha baye kubaholi bamaqembu amancane ambozwe yilesi sigaba—bakhathazekile kokuhlela kwamasu okusebenzayo.
Isigungu sokuhlela esiphezulu siguqula uhlelo lwamasu. Abaphathi abaphakathi baphenduka lolu hlelo lwecebo lobuciko lube ama-oda amaqhinga. Lokhu bakwenza kokubili isikhathi eside nangesikhashana. Uma ufika ezansi kwesikhathi esifushane sesisekelo, unezinhlelo zokulwa.
Ngakho-ke, uhlelo lokulwa lisho ukuguqula ukuhlelwa kwamasu kube ngama-targets ngqo, angenziwa abese esebenza. Lokhu kumele kufezeke enkathini yesikhathi esiseduze namanje, hhayi ekude esikhathini esizayo. Ngakho-ke lapha unecebo lwamasu elihle lokuguqulwa eliguqulwa libe ngama-targets amahle okuhloswe ngawo bese kwenziwa, okuholela enqubekelaphambili phambili. Ukwanele kwalezi kulandelana okwenziwe ngempumelelo kusho ukuthi ungayinqoba impi.
Lokhu kufanele kukunikeze ithuba lokuthi uhlelo lokulwa luyini ngempela. Kuluhlu lwama-targets okumele enziwe esikhathini samanje noma ngokushesha okukhulu. Lama-targets abhekela isikhashana esincane nje esizayo. Ukuzenza kuzobeka ingxenye ethile yohlelo lwamasu ekusebenzeni.
Ukusuka kulokhu, kuyacaca ukuthi abaphathi basebenza kangcono kakhulu uma kunohlelo lwamasu futhi lapho kwaziwa okungenani phansi kuze kufike ezingeni labahleli beqhinga. Futhi abahleli bamacebo nje ilabo bantu ababeka izinhlelo zamasu kuma-targets, aziwayo futhi enziwe yibo abaphathi abaphakathi naphansi. Lokhu ukuphatha okuphumelele kakhulu uma kwenziwa kahle.
Vele, izinhlelo zamasu eziphelele nezilungile zizoholela ezenzweni ezenziwayo ezizosiza noma zibalulekile. Futhi izinhlelo zamasu ngokwazo zincike ezinhlelweni ezibhalwe kwifomu lwama-targets ezisebenzayo futhi zisebenzise izinsiza ezikhona (imali, abasebenzi, okokusebenza, okuhlinzekwayo, njll.).
Esikhuluma ngakho “njengokuhambisana” (ukuqeda lokho oku-odiwe) yi-target eyenziwe. Umuntu owenza i-target kungenzeka angazi ngohlelo lwamasu oluphelele noma ukuthi i-target yakhe ingena kanjani kulona. Kepha abaphathi kumele benze isiqiniseko sokuthi wonke ama-targets aveza uhlelo oluphelele lwezinhlobo zamasu.
Uma sikhuluma ngokuxhumanisa, sikhuluma ngempela ngokuqinisekisa ukuthi izinhlelo zamasu ziba yinguqulo enobuhlakani, ethi, ezingeni eliphansi lokuzibophezela enhlanganweni, ihlela izenzo ukuze zonke zihlangane endaweni eyodwa.
Nasi isibonelo sokuqondanisa, noma ukuhlanganisa okufanele. Uma ufaka abantu abaningi kwihholo elikhulu (igumbi elikhulu elisetshenziselwa imihlangano) bese ubabeka emikhondweni eyahlukene bese ubabiza ngokungazelele ukuthi baqale ukugijima, bebezogijima bangene komunye nomunye futhi nizobe nihlangane ube nokudideka okuphelele. Lesi isithombe omunye asitholayo lapho izinhlelo zamasu kungaphendukwanga ekuhleleni okuhle futhi kungenziwa ngendlela ehambisanayo. Labantu abagijima ehholo bangenza sengathi bashesha kakhulu, mhlawumbe futhi bacasuke kakhulu futhi badidekile. Kungabonakala sengathi bebesemsebenzini futhi bekhiqiza, kepha lokho ngokuqinisekile bekungeke kube okunembile ngoba izenzo zabo bezingahlelwanga.
Manje uma sifaka laba bantu ehholo linye futhi sibenze benze okuthile okuwusizo, njengokuhlanza ihholo, sibhekana nezenzo ezithile zabantu ababandakanyeka kwimishanelo kanye nama-mop futhi obani abatholani, nabasusa udoti njalonjalo. Uhlelo lwamasu lokuthi “Lungisa ihholo ngenxa yomhlangano” luphenduke uhlelo olusezingeni eliphezulu olusho ngqo ukuthi ubani wenza ini nokuthi kuphi. Lokho kungaba uhlelo lweqhinga. Umphumela kuyoba yihholo elihlanzekile elilungele umhlangano.
Kepha “Hlanza ihholo ngenxa yomhlangano” ngokusobala kuyingxenye encane yohlelo lwamasu eliphelele. Ngamanye amagama, uhlelo lwamasu ngokwalo kufanele luhlukaniswe izingxenye ezincane.
Kwi-organization, inhloko yeqembu ingaba nohlelo lokulwa olungaba nezinyathelo ezimbalwa kulo. Lezi zinyathelo bezizohamba kubaphathi abaphansi, ababezobhala izinhlelo zokulwa kwizigaba zabo. Lezi zinhlelo zokulwa zingaba nemininingwane eminingi kunecebo lokulwa kwinhloko ye-organization. Ngakho-ke sinohlelo olukhulu oluphelele oluthi ngokuya kancane luchazwa ngokwengeziwe ngokudilizwa lube izigaba, ngalezi zingxenye zihlukaniswe ngama-targets amancane.
Le nqubo kufanele iholele kwizifezo ezisiza ekwenzeni uhlelo lwamasu lenziwe. Futhi uma ukuqonda konke okungenhla, uzobe usunekhono kakhulu kulokho okudingekayo ukuhlanganisa imisebenzi eminingi okufanele yenziwe ukufeza uhlelo lwamasu.
Lokhu kuhlela kuncike kwizinsizakusebenza ezitholakalayo. Ngakho-ke inhlangano ekhula ngosayizi noma izama amaphrojekthi amakhulu kufanele ifake ukuhlela okuthile kwenhlangano nama-targets nezinhlelo zokulwa ukuze inhlangano ihlale ndawonye njengoba ikhula.
Umuntu akabhali uhlelo lokulwa ngesisekelo esithi “Ngizokwenza kanjani kusasa?" noma “Ngizokwenza kanjani ngesonto elizayo?” Lokhu kuhle ngendlela yayo futhi kungcono kunalutho. Kepha okufanele kuphathwe ngakho ngumbuzo ojwayelekile wokuthi “Yiziphi izinto okufanele ngizenze ukuze ngifeze lolu hlelo oluhlelekile ukuze ngithole imiphumela eqondile yalesi sigaba secebo lobuciko, ngemikhawulo yezinsizakusebenza ezitholakalayo?” Bese omunye engaba nohlelo lokulwa losuku olulandelayo noma ngesonto elilandelayo.
Kunento eyodwa okufanele uyiqaphele uma wenza izinhlelo zokulwa. Umuntu angabhala ama-targets amaningi angahambisani kangako noma okungenakwenza lutho nohlelo lwamasu. Lama-targets angagcina esegcina abantu bematasa kakhulu kepha bengafezi ingxenye yohlelo lamasu oluphelele. Ngakho-ke, uhlelo lokulwa lungaba yisibopho lapho lungacindezeli noma yiliphi icebo lwamasu futhi lungafezi noma iyiphi inhloso yeqhinga.
Ngakho-ke luyini uhlelo lokulwa? Kungama-targets enziwayo, bese kubhalwa phansi, kufeza ingxenye yohlelo lwamasu okudingeka ukwenziwa ngalesi sikhathi.
Ukuqonda i-targeting nokusebenzisa ngobuchule i-targeting kwizinhlelo zokulwa kubalulekile ekufezeni konke okuphakamisa ukukhiqizwa, imali engenayo, ukulethwa (ukuthumela imikhiqizo eyodwa kulabo abayifunayo) noma yini enye engumphumela ofisekayo.
Kuyisivivinyo somphathi ukuthi angalungisa icebo lempi ngekhono bese enza uhlelo lokulwa lwakhe lusebenze. Lokhu kukhombisa amakhono nekhono lesikhulu. Izinhlelo zokulwa njengethuluzi zingasebenza futhi ngabantu kuyo yonke imikhakha yempilo nakunoma yimuphi umsebenzi.